I-3D Imephu Yehlabathi, i-atlas yemfundo - i-Geofumed
I-3D Imephu Yehlabathi, i-atlas yemfundo
Agasti, 2009 Iiphotography, Ukufundisa i-CAD / GIS
Imephu yehlabathi ye-3D Kuza kusikhumbuza ngala maqhinga asetshenziswe esikolweni, nangona amandla ayo ayaphaya koko. Ibhaluni equkethe idatha engaphezulu kunokuba ifaneleke kwihlabathi kunye ne-atlas, ikwaquka umncedisi weskrini se-movie ongadlala umculo we-mp3 ngasemva.
Amandla kwiMephu yeHlabathi ye-3D
Iqulethe iirekhodi ze-30,000 zezixeko kunye namazwe, eziqulethe iinkcukacha zendawo kunye nedatha yoluntu. Kwakhona iyavuma ukuba idatha eyongezelelweyo iyongezwa.
Unenketho yokuqalisa imini okanye ubusuku, kwaye ngokwexesha le nkqubo kubonisa indlela eza kubonakala ngayo. Kwimeko yeli hlabathi elisebusuku, ukukhanya kobusuku kuboniswa.
Inokubonwa kwisikrini esipheleleyo, iwindow kunye nakwi-ballo esintantayo nayo yonke into ebonakalayo
Bayakwazi ukulinganisa ubude, kwaye bamkele iiyunithi zamatriki.
Izisa ezinye iisampuli, kodwa imibala kunye nokungafihli kolwazi oluhlukeneyo njengama-ocean, umoya, ukuphakama, njl. Olu hlobo lokugqibela lugxininiswa ngokwenza umboniso okhangayo.
Eyona ndlela isebenzayo, izixhobo zokulawula zihamba kwaye ziyafumaneka naphi na kwindawo.
Unako ukugcina indawo ngokubanika inombolo yecacpad. Uncedo ukuhamba phakathi kweendawo ezenza umdla.
Inemiphetho yokujika, ukufuduka, indlela kunye nokukhusela ngasenyakatho. Ngelishwa ukuguqulwa kwezi zinto akunakwenzeka, ukukwazi ukubenza badibaniswe kwiimpawu ze mouse + ctrl, kubalulekile ukuba usebenzise iqhosha lokungena kwezinye iinguqulelo.
Akulunganga kwisicelo esingakhange silinganise i-6 MB, idatha enayo ivela kwimithombo efana nale:
gtopo30, iBhanki yeDatha yeDatha yeMhlaba, iGazethi yehlabathi, i-CIA World Fact Book 2002, i-2004, i-Blue Marble
Njengenguqulo yecingo iza kunye neendawo ezisisiseko, kodwa i-premium version ikuvumela ukukhuphela ukuya kwi-30MB yedatha yendawo. Enomdla kakhulu kwiinjongo zemfundo, inguqulo ehlawulwayo ihamba nge $ 29.
Landa i-3D yeMephu yehlabathi
Post edlulileyo«Edlulileyo Susa iRibhoni ngo-AutoCAD 2009?
Post Next Touche Google Maps ExtractorOkulandelayo "
Impendulo ibenye kwi "3D Imephu yeHlabathi, indawo yokufunda"